Duuraa duuba tartiiba wanta(toota)filatamanii jijjiira.
Dhangii - Qindeessi (Barreessaa LibreOffice, Calc LibreOffice) fili
Baafata halqara bani - Qindeessi (Imprassii LibreOffice, Fakkassaa LibreOffice) fili
Fooyyeessi - Qindeessi (Fakkassaa LibreOffice) fili
Baqqaana barruu fi saxaatoodhaaf
Tokko tokko wanta galmee kee keessa keesse wanta dursaa irratti walitti aanuun tarreeffameera. Duuraa duuba tartiiba wantichaa galmee kee keessaa jijjiiruuf ajajawwan qindeessuu fayyadami. Duuraa duuba barruu jijjiiruu hin dandeessu.
Wanticha filatame duuraa duubaa kallatti irraa sochoosam, kunis fuldura wantota.birootti.
Wanticha filatame sadarkaa tokkoo olkaasu sochoosa, kunis duuraa duubni tartiibaa gubbaatti dhiyaata.
Wanticha filatame sadarkaa tokkoo gadii busuun sochoosa, kunis duuraa duubni tartiibaa gaditti dhiyaata.
Gara Duubatti Ergi
Wanticha filatame gara duuraa duubaa tarreeffama gaditti siksa, kunis wantoota biraa duuba jira.
Wanticha filatame gara fuldura barruuti siksa.
Wanta filamee kan gara barruu biratti siksa.
Title is: Qindeessi